Izinzuzo kanye Nokuqashwa Kwezindawo Zokuvakasha
Ukuhamba kwebhajethi Amathiphu & Tricks
Ingabe Kufanele Uqashe I-Cottage Yokuphumula?
Ukuqasha indawo yokuhlala eholidini kungakusindisa imali ohambweni lwakho olulandelayo. Izinzuzo zokuhlala endaweni yokuqashisa eholidini esikhundleni sehhotela zibonakala zinembile - isikhala esiningi, izakhiwo zekhishi - kodwa ukuqasha i-cottage noma ikakishi akuwona wonke umuntu. Ake sibheke izinzuzo nezindleko zokuqasha indawo yokuhlala.
Izinkampani Zokuqasha Zokuvakasha
Unesizinda sasekhaya. Ungalala, ubonesee futhi ubuyele "ekhaya lakho kude nomuzi" noma kunini lapho uthanda khona.
Uma uzizwa ngaphansi kwesimo sezulu, ungakwazi ukuphumula futhi uphinde uphinde uphume endaweni enhle.
Udinga kuphela ukukhipha kanye. Abaningi abahamba phambili abayithandi ukupakisha nokukhipha usuku lonke. Ukuqasha i-cottage yeholide kukuvumela ukuba uhlale, uzikhandle ekhaya futhi ujabulele iholide lakho ngaphandle kokuba ujikeleze amasokisi akho kanye nosuku ngalunye usuku.
Unamathuba amaningi. Ukuqashiswa kweholide kunamakhasi amaningi wesigcawu umuntu ngamunye kunamakamelo ehhotela noma ngisho nezindawo eziningi zokulala nezinyathelo zokudla kwasekuseni. Ngisho noma uhamba neqembu elikhulu noma omunye umbhangqwana, uzoba nendawo enkulu uma ukhetha i-unit yokuqasha efanele. Okuhle kunakho konke, konke kungokwakho. Ngeke udingeke ukhathazeke ngamabhati okugeza okwabiwe noma omakhelwane bomsindo.
Ungahlala endaweni yakho yokuphupha. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha i-cottage yase-beachfront, i-cabin ye-mountain noma idolobha elisemadolobheni, amathuba okuthola indawo yokuqashisa iholide evumelana nawe ngokuphelele.
Ungakhetha uhlobo lwempahla nezinsiza ezizokwenza iholide lakho likhetheke ngempela. Kwabaningi abaqashisayo, ibhuloho elishisayo noma ibhuloho ye-Jacuzzi yinto ethi "kufanele-babe", kuyilapho abanye abaqashi bezokhetha ukuguquka kwangaphandle, izibhamu zomlilo kanye nama-gas grills.
Uma uhlola uhlu lwezinsuku zokuqashisa zeholide ngokucophelela, cishe uzokwazi ukuthola indawo yokuhlala ephethe yonke "eyengeziwe" oyifunayo.
Ungagcina imali ngokuthenga nokupheka ukudla kwakho. Kubanikazi abaningi, abakwazi ukupheka "ekhaya" yisona sizathu esiyinhloko sokukhetha i-cottage yeholide. Kuyinto ejabulisayo ukuthenga ezitolo zendawo zokudla futhi ujabule nakakhulu ukuchitha imali yakho yokuvakasha ekuboneni indawo esikhundleni sokudla ngaphandle.
I-Cons Rental Rental Rental
Ngokuvamile ngeke uthole umphathi wempahla noma abasebenzi abesekelayo kusayithi , ikakhulukazi uma uqasha ngokuqondile kumnikazi. Lokhu kusho ukuthi kuzothatha isikhathi ukuxazulula izinkinga, kungaba ezinkulu noma ezincane. Uma unenkinga yokupakisha isineke sakho kanye nesigqoko sakho sokugqoka, ukuqashisa i-cottage kungase kungabi yindlela enhle kakhulu.
Kungase kudingeke ukuthi ulethe ukulala, amathawula nezinye izinto . Ezinye zokuqashiswa kweholide zihlanganisa i-linens namathawula, kuyilapho abanye, ikakhulukazi eYurophu nasezingxenyeni zaseCanada, abakwenzi. Kuzodingeka ucabangele lolu daba ngokucophelela, ikakhulu uma uhamba lapho uya khona ngomoya.
Mhlawumbe uzodinga ukuletha noma ukuqasha imoto , ikakhulukazi uma uqasha indawo yokuhlala echwebeni, intaba noma indawo yokubhuka. Izakhiwo zokuvakasha zendawo yedolobha zingase zisondele ezokuthutha zomphakathi, kodwa uzodinga imoto ukuze ufike ku-cottage olwandle olwandle noma isikhala sezintaba.
Kuzodingeka uthathe emva kwakho. Ukuqashiswa kweholide ngokuvamile akunikezi izinsizakalo. Kumele futhi wenze amalungiselelo akho okuhamba ngezinsuku zakho ngoba ngeke ukwazi ukufinyelela kubasebenzi bedesksi ngaphambili noma i-concierge.
Ungadumazeka uma ufika. Ukubukeka kungakhohlisa; "indlu yokunethezeka" oyibonayo kuyi-intanethi ingahlinzekwa nge-garage ukudayiswa noma ubeke ezinye izithiyo ongeke ukwazi ukuzilungisa.
Uma ungeke ukwazi ukusingatha izinkumanga, ungase ukhethe ukunamathela ekuqinisekisweni kokuzama kweqiniso kweketho lakho lezintandokazi zehhotela .
Uhambo lokuhamba 101
Amahostela eNtsha 101
Izimpawu eziyi-10 eziphezulu ze-Scam Yokuhamba Ekhona
Izindlela ezingu-7 zokuzivikela ezikhungweni zokuqashisa zeholide
Indlela Yokulondoloza Imali Emkhakheni We-Ski Family
Iziphambeko Ezijwayelekile Zezindawo Zokuvakasha Zomhlaba
Umkhosi waseJaisalmer Desert
Rose Parade - Amathiphu nemibuzo ebuzwa njalo
I-Budapest ngoNovemba - Isimo Sezulu, Imicimbi, Namasu
Imisebenzi Engcono Yeholide yaseSan Diego
I-Off-Roading e-Wickenburg's Box Canyon
Buyekeza: Ikhibhodi ye-iClever ephathekayo ye-Bluetooth
ILondon eya eBristol ngeTeam, Bus and Car
Konke mayelana ne-Wurst: i-Bockwurst
Amathikithi e-Magic Mountain, amakhuphoni nama-Akhawunti
Indlela Yokuwina E-Blackjack eLas Vegas
Umculo ku-Garden 2017 eDenert Botanical Garden, Phoenix
Umhlahlandlela waseMontpellier, eNingizimu yeFrance
Indawo Yokuthola Amaphiko Asezinkukhu AseBuffalo